FITOHANANA ETO AN-DRENIVOHITRA : Tsy voahaja intsony ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana
Toa zary efa tafiditra ao anatin’ny andavanandrom-piainan’ny olona eto Antananarivo ankehitriny ny fiaretana ny « Embouteillage » na ny fitohanan’ny fifamoivoizana rehefa hivoaka ny trano, indrindra ireo tsy maintsy mandeha fiara. 2 janvier 2018
Vao mainka nihamafy sy nihanaharitra kosa izany nandritra ny fetin’ny noely sy ny faran’ny taona teo iny. Faritra maro teto an-drenivohitra no nahitana izany tranga izany, raha tsy hilaza afatsy iny faritra Anosizato iny izay isany miaina isanandro amin’ny fitohanan’ny fifamoivoizana. Iny toerana iny izay mampitohy an’Ampitatafika, fasan’ny karana, Anosibe, Anosipatrana.
Amin’ny ankapobeny dia efa misy ihany ny lamina sy ny fandrindrana ataon’ireo mpitandro filaminana saingy matetika dia maharitra ora maro hatrany ny fitohanana. Antony vitsivitsy no mahatonga izay fitohanan’ny fiara izay araka ny fantatra. Isan’izany ny faharatsian’ny lalana, indrindra amin’izao ankatoky ny fotoam-pahavaratra izao. Etsy ankilany ihany koa ny fahateren’ny lalana vokatry ny mpivarotra sy ny hamaroan’ny olona. Ankoatra ireo dia isany antony lehibe, izay tena manampy trotraka ny fitohanana ny fanamparam- pahefana na ny fandikana tsotr’izao ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana.
Zary lasa fomba fanao mantsy amin’izao fotoana izao, indrindra tamin’ny fitohanana mavaivay nandritra ny fety farany teo, ny misongona amin’izay toerana tiana hisongonana. Manoloana izany dia lasa mihitsoka avokoa na ny andaniny na ny ankilany amin’ny arabe satria tsy antonona hilaharan’ny fiara telo milahatra ny lalana. Ankoatran’ny fitohanana aterak’izany dia tsy ferana ihany koa ny mety hisian’ny lozam-pifamoivoizana.
Araka ny tsapa ankehitriny, dia maro amin’ireo mpamily no toa efa mihevitra fa tsy mipetraka intsony ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana ka maro ireo tsy mahatsiaro tena ho diso na dia eo am-pandikana lalàna aza. Andrasana araka izany izay mety ho paikady hapetraky ny fanjakana amin’ity taona vaovao ity hamahana io olana mianjady amin’ny vahoaka io.